Feno kapoaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Na inon-kapoaka mangidin'ny tany,
e ! aza mba kivy, onony ny fo :
tsy misy mafaitra ny atin'izany
rahefa tampohana fiononam-po !
Izay iray tazanina, tena mahafanina
Tahaka an’io an’i Ny Avana Ramanantoanina
Avokoa ny voalaza momba ity kapoaka
Tsy misy milaza hamamiana fa ngidy no avoaka
Eny rehefa zohina ireo teny na fanazavana momba ny kapoaka eto amin’ny tontolony serasera tambazotra sosialy dia milaza zava-dratsy raha vao resaka kapoaka no ambara. Ka miainga amin’ny baiboly tokoa ry zareo miresaka io kapoaka io. « Raiko ô, raha sitrakao, dia esory amiko ity kapoaka ity » io no antsain’ny maro izay manoratra momba ny kapoaka. Raha io dia kolontsaina kristianina izany no tena miresaka kapoaka fa tsy kolontsaina malagasy. Ilay kolontsaina kristianina mitory ngidim-piainana anefa fa tsy ilay mitondra hamamiana. Mila manova tanteraka ny kristianina raha izany.
Fa raha eny anivon’ny fiaraha-monina anefa dia ny ao ankibony tena voizin’ity resaka kapoaka ity. Hoy tokoa ny eny anivon’ny fiaraha-monina : « sitrany ahay iray kapoaka e » izay mitovy amin’ny fiteny tena taloha manao hoe « sitrany ahay vaza-mihetsika » sitrany ahay misy harapaka. Ao koa ny fampiasana azy manao hoe « aza mikitika ny kapoakako eo an », aza mikitika ny fihinanako eo.
Fa dia io ambilany io tokoa no fototry ny resaka raha vao kapoaka no resahina. Tsy hanao zavatra ny malagasy satria tsy mampitombo ny kapoaka miditra antsompitra na mbilany ve no hisasarany ? zavatra tsy ahazoana iray kapoka ve dia handaniako ron-doha ?
Saingy, aok’itsy. Misy tokoa ireo mampiasa ny voambolana kapoaka hilazana fa voafehiny ilay zavatra iray. Anga moa tsy izany iky no nambaran’ilay iraikalahy iny raha nivolana izany nanao hoe « kapoakako io miresaka amin’ny mpamatsy mpamatsy vola io ». Kapoaka-ko, kapoaka-ko…
Dia izao indray mirotsaka antsehatra ny ministeran’ny varotra fa hamoaka kapoaka manara-penitra fa tsy lasa ity kapoaka samy manana ny azy ity. Hamoka kapoaka satria dia efa tany 1962 anie no nisy fanaraha-maso farany momba ny fandanjana sy famarana entana hamidy. Fa rehefa mba hanontaniana ireo olon-dehibe tamin’ny taona 1962 izany dia samy milaza fa fatram(bary ane no nampiasaina taloha fa tsy kapoaka e…
A zalahy kolontsaina vahiny izany ilay kapoaka ka normaly raha lasa mikapoka antsika izy io ankehitriny fa tsy mba nahay nanaraka ilay fiteny manao hoe tano ny an’ny tena fa ny azy any ts homeny…
Tafatafa ihany ny ahy Ratalata Jn Ba fa soava andro e ka soloy kapoaka feno hamamiana ny kapoaka mangidy ao izao e… na zi papay aza tsy maninona e.